Xhosa - PM Proofreading
Ukuvavanywa kwakhona kwe-PM kukuFunda ngokuFunda kwakhona kunye noMboneleli weeNkonzo zokuHlela
Iinkonzo zokuFunda kwakhona kwe-PM zikhokelela ekuboneleleni ngovavanyo kunye nokuhlela iinkonzo ezinikezelwe ngo-2012. Sinikezela ngeenkonzo zethu zokujonga iimpazamo koonjingalwazi, abaphandi bezemfundo, abafundi abenza isidanga sokuqala, iijenali, iiyunivesithi, amashishini kunye neengcali zeshishini kwihlabathi liphela. Iinkonzo zethu ziqinisekisiwe ngomgangatho wokuthembeka, kwaye inkqubo yethu ehlaziyiweyo ikhuselekile kwaye iyimfihlo yoxolo lwengqondo olupheleleyo. Impendulo evela kubathengi bamanye amazwe ababuyayo ibonisa isidima sethu ngomgangatho, uguquko olusebenzayo kunye namaxabiso afanelekileyo.
Inkqubo yethu yokuFunda kwakhona
Inkqubo yethu ehlengahlengisiweyo iquka ukuphononongwa okubanzi (upelo / typos, igrama, iziphumlisi) kunye nokuhlela (ukwakheka kwezivakalisi, ukunamathela nokuhamba kakuhle, ukusetyenziswa ngokuchanekileyo nangokucacileyo kolwimi, isigama sesifundo / ithoni). SiPolisha incwadi yakho ebhaliweyo kwaye siyilungiselele ukupapashwa okanye ukuprinta. Silandelela lonke utshintsho olwenziwe emsebenzini wakho, ukuze ukwazi ukulujonga lonke utshintsho olwenziwe kwaye ukhethe ukuba ulwamkele okanye ulwalile utshintsho ngalunye. Zombini ezi nguqulelo zotshintsho zilandelelweyo kunye nenguqulelo yokugqibela ecocekileyo yesandla sakho zibuyiselwa kuwe. Sikwafaka amagqabantshintshi apho ungaphucula khona ukubhala kwakho. Ukuvavanywa kokugqibela komgangatho oqinisekileyo wokuvavanywa komgangatho kwenziwa emva koko kukuvavanywa kwesibini ukuqinisekisa ukuba umbhalo obhaliweyo ubuyiswa ungenazimpazamo.
Abavavanyi bethu besiNgesi
Iqela lethu liqukethe iingcali zemicimbi yezifundo, ezinamabanga emfundo aphezulu kwinqanaba le-Master kunye ne-PhD kwiiyunivesithi eziphezulu. Wonke umntu ofunda kuvavanyo lokufunda ufunda ngokukhethekileyo kuqeqesho oluthile, kwaye uya kuwuhlela umbhalo-ngqangi ngaphakathi komgangatho wobungcali babo. Ngale ndlela umvavanyi wokuvavanywa uyakwazi ukuhlela ngokufanelekileyo lo mbhalo-ngqangi, kuba uqhelene namagama aphambili kunye nesigama esikhethekileyo esisetyenzisiweyo kuloo ndawo. Abavavanyi bayo yonke ingqeqesho bayafumaneka.
Baneminyaka eliqela yamava okufunda kwakhona, kwaye banobuchwephesha obufunekayo bokuphicotha umsebenzi wakho ngokugqibeleleyo, ngelixa kwangaxeshanye kugcinwa zombini intsingiselo ekujoliswe kuyo kunye nokuchukumisa kwakho. Amalungu eqela lethu ngalinye enza inkqubo engqongqo yokukhetha, kwaye alandele iinkqubo zokuqinisekisa ubungqina eziqinisekisiweyo ezisemgangathweni ezinjengezo zisetyenziswa yi-‘Chartered Institute of Editing and Proofreading ‘(CIEP). Amanye amalungu eqela lethu adweliswe apha ngezantsi.
Ukusebenzisana neeYunivesithi zeHlabathi liphela
Sisebenzisene ngqo nabafundi abasele bethweswe izidanga, oonjingalwazi kunye nabasebenzi bezemfundo abavela kwiiyunivesithi kwihlabathi liphela ukusukela ngo-2012. Nceda unxibelelane nathi ukuba unqwenela ukusebenzisana nathi.